Imidlalo yebhodi yokulingisa engu-15 ehamba phambili | Nginike isikhathi sokuphumula
Isaka | 20/12/2021 15:56 | Kubuyekezwe ku- 20/12/2021 16:01 | General
I-Los imidlalo yebhodi yokulingisa ngidinga ukushiwo ngaphandle eminye imidlalo yebhodi, njengoba abekwe njengomunye wabasebenzisi abaluthayo kakhulu futhi akhethwa abanye abasebenzisi. Bazele ukuzokwenza ukushiseka okukhulu, nabalandeli abagqoka njengabalingiswa bale midlalo, abaklama amasethi abo aphrintiwe nge-3D noma enziwe ngezandla, abaklama futhi bapende imifanekiso yabo siqu, njll. Baze bahuqa abantu abaningi ababengewona ama-pro-book kakhulu, bathuthukisa amakhono engqondo, umuzwa wokubambisana, njll.
Konke umkhuhlane ovela ngokuqondile kulokho okwenza le midlalo ihluke, futhi kunjalo ukucwiliswa komdlali omkhulu lokho kuvumela. Le midlalo ixoxa indaba, isetha igeyimu, futhi abadlali bangabalingiswa okufanele bangene endimeni noma endimeni, yingakho igama labo. I-adventure yalabo abafuna ukuphila izimo ezithokozisayo nezigigaba ezinhle kakhulu.
1 Umhlahlandlela wokukhetha imidlalo yokulingisa engcono kakhulu
1.1 Imigodi kanye nezilo
1.2 Iso elimnyama
1.5 Amazwe Avinjelwe
1.6 Inganekwane ye-5 iyakhala
1.7 I-Gloom Haven 2
1.8 Ukuwa kwe-Avalon
1.9 INkosi Yezindandatho: Uhambo lokunqamula eMhlabeni Ophakathi
1.11 Ubumnyama obukhulu
1.12 Iphupho elibi: Izigigaba ezesabekayo
1.13 U-Arkham wesabeka
2 Iyini i-RPG?
3 Izinhlobo zemidlalo yokulingisa
3.1 Ngokwendlela yokudlala
4 Ungawukhetha kanjani umdlalo wokulingisa ofanele
Umhlahlandlela wokukhetha imidlalo yokulingisa engcono kakhulu
Phakathi kwezinye ze imidlalo yebhodi yokulingisa emangalisa kakhulu ongayithenga, futhi okungabathengisi abahamba phambili kulesi sigaba, faka:
Imigodi kanye nezilo
I-Dungeons Essential Kit ...
Ungomunye wemidlalo yebhodi edlala indima esezingeni eliphezulu. Enye yezinto ezisakazeke kakhulu emhlabeni. Kungumdlalo wokubambisana oyinganekwane okugxilisa endaweni yonke enomlingo. Ifaneleka kusukela eminyakeni eyi-10 ubudala, futhi ingadlalwa nabadlali abaphakathi kuka-2 no-4. Kuyo kuzodingeka ukhethe umlingiswa wakho futhi ulwe nezilo eziyizifanekiselo, futhi uphile izigigaba ezintsha zikhathi zonke, njengoba ukuthathwa kwezinqumo nethuba kusho ukuthi akufani ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, okuhle ukuthi uzothola izincwadi ezimbalwa ezinezindaba nezindikimba ezahlukene ongakhetha kuzo noma ozoziqoqa.
Thenga iDungeons & Dragons I-adventure iyaqala Thenga Ikhithi Yokuqala Ebalulekile
Ngenye yezakudala, futhi sekuphele amashumi ambalwa eminyaka le game yaseJalimane yethulwa. Ushicilelo lwesi-5 luhunyushelwe olimini lwesi-Spanish, ukuze abalandeli lapha bakwazi futhi ukujabulela izigigaba ezimnandi e-Aventuria, izwekazi eligcwele izinganekwane, abalingisi abangaqondakali, izilo nezidalwa ezingajwayelekile, nalapho abalingisi bazodlala khona amaqhawe.
Thenga Iso Elimnyama
I-Devir Pathfinder. Imithetho...
Lesi esinye isihloko singesinye semidlalo yokulingisa eyaziwa kakhulu. Kuyo, umdlali ngamunye uzoba nendima yomuntu osanda kuhlasela okufanele asinde ezweni elimangalisayo eligcwele umlingo nobubi. Incwadi ihlanganisa imithetho yegeyimu, umqondisi wegeyimu, nemithetho yokudala abalingisi abahle, izinketho zokupela, njll. Umdlalo ofanelekile ongawuqala unikezwe ubulula bawo.
Umdlalo Wokulingisa Warhammer ...
I-Warhammer idinga izethulo ezimbalwa, yaziwa kakhulu emhlabeni wegeyimu yevidiyo kanye naphakathi kwemidlalo yebhodi yokulingisa. Igeyimu emnandi ekhumbuza i-WoW noma i-Warcraft ngezindlela ezithile, njengoba ikuyisa emhlabeni omdala we-gothic obuswa izidalwa ezisabekayo, amaqhawe, izimfihlakalo nobungozi.
I-Forbidden Lands Quetzel's ...
Idalwe yiFree League Publishing, enikeza ulwazi oluhle ngesitayela sesikole esidala esimsulwa. Manje sekuza ohlotsheni lwayo olusha noomakhenikha abasha ukuze baphile adventures Ezweni Elingavunyelwe. Kulokhu, abadlali abadlali amaqhawe, kodwa izikhohlakali nabahlaseli abazokwenza noma yini ukuze basinde emhlabeni oqalekisiwe lapho izakhamuzi zakhona zingakwazi ukuhlukanisa phakathi kweqiniso nenganekwane.
Thenga Umhlaba Ongavunyelwe
Inganekwane ye-5 iyakhala
Imidlalo Yendiza Yenganekwane - I...
I-Need Games idale le geyimu yebhodi ye-RPG ngesilungiselelo esisuselwe kunganekwane yasempumalanga. Ibekwe e-Rokugan, indawo ecatshangwayo e-feudal Japan. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa amathonya athile aseShayina, futhi lokho kukubeka ezicathulweni zama-samurai, i-bashi, i-shugenja, izindela, njll.
Thenga Inganekwane yezindandatho ezi-5
I-Gloom Haven 2
I-Gloomhaven 2nd Edition -...
Uhlelo lwesibili lwe-Gloomhaven nalo luhunyushelwe olimini lweSpanishi. Lo mdlalo awuwona owodwa onconywa kakhulu ukuthi uqale emhlabeni wokulingisa, kodwa uhloselwe kakhulu ochwepheshe. Umdlali ngamunye uthatha indima yokuba i-mercenary egxile emhlabeni wenganekwane oguqukayo. Ngokubambisana bazosebenzisana balwe emikhankasweni eyahlukene eshintshayo kuye ngezenzo ezithathwayo.
Thenga iGloomhaven 2
I-Grail Engcolile: Ukuwa ...
Esinye sezihloko zezingcweti. Lesi sihloko sokulingisa sihlanganisa izinganekwane ze-Arthurian, inganekwane ye-Celtic, kanye nendaba ejulile nehlanganisayo evumela izinselele ukuthi zifinyelelwe ngezindlela ezihlukene isikhathi ngasinye lapho igeyimu idlalwa. Kuzodingeka wenze izinqumo ezinzima kakhulu, nezinye ezibonakala zingabalulekile, kodwa ezingashintsha izinto ngokuphawulekayo ngokuhamba kwesikhathi. Usulungile?
Thenga Ukuwa kwe-Avalon
INkosi Yezindandatho: Uhambo lokunqamula eMhlabeni Ophakathi
Amageyimu Endiza Yenganekwane -...
Isihloko sika-JRR Tolkien asigcinanga nje ngokuba ifilimu nomdlalo wevidiyo, siphinde size njengomdlalo webhodi wokulingisa naleli phakethe. Kuyo uzicwilisa ohambweni olunqamula i-Middle-Earth, ngezigigaba kanye nabalingiswa basenganekwaneni kakhulu bale saga. I-dynamics yomdlalo ihlukaniswe yaba yimikhankaso, kanye nama-ramifications, ukuze kukumangaze noma udlala ngokuphindaphindiwe ...
Thenga Inkosi YamaRings
Ngemva komlotha weMpi Yezwe I, idolobha lonxiwankulu elaziwa ngokuthi iLa Fábrica livale iminyango yalo, ladonsa ukunaka kwamanye amazwe angomakhelwane. Iqiniso elifanayo elasungulwa ngo-1920 nalapho umdlali ngamunye ezodlala khona ummeleli wamaqembu amahlanu aseMpumalanga Yurophu, ezama ukuceba futhi afune indawo ezungeze i-Factory engaqondakali.
Ubumnyama Obukhulu bunikeza umuzwa omuhle kakhulu ngesitayela sangempela sakudala. Umdlalo webhodi wesimanje, ogcwele isenzo onezithombe ezincanyana ezinhle kanye nomdlalo olula kakhulu. Igxile ezenzweni zamaqhawe, ngaphandle kwesidingo sokuthi umdlali enze njengomhlahlandlela wokulawula izitha.
Thenga Ubumnyama Obukhulu
Iphupho elibi: Izigigaba ezesabekayo
I-Diset- Nightmare - Umdlalo ...
Isu, ingqondo, ubuhlakani, ukubambisana ... konke kuxubene endaweni eyesabekayo lapho ucwila khona emhlabeni ogcwele izimanga nezimfihlakalo. Umdlali ngamunye uzothatha indima yendodana kaCrafton, futhi kufanele athole ukuthi ubani owabulala uyise ngokuphenya imikhondo yendlu endala yomndeni.
Thenga Amaphupho Asebusuku
Indiza Yamaphupho - Arkham ...
Umdlalo owesabekayo nokulingisa indawo okuyisa edolobheni lase-Arkham, elisongelwa izidalwa zangemva kokufa. Abadlali kuzofanele bahlangane, bathathe indima yabaphenyi, ukuze basindise isimo esibeka umhlaba wonke engcupheni. Umgomo uwukuqoqa imikhondo nezinsiza ezidingekayo ukuze ubhekane nabaseNdulo futhi ubhuntshise izinhlelo zabo ezimbi.
Thenga i-Arkham Horror
Iveyili - Umdlalo we ...
Lo mdlalo wokulingisa unetimu ye-cyberpunk, esimeni lapho ubuchwepheshe buphushele khona isintu emikhawulweni yakhona, nalapho kunzima khona ukuhlukanisa phakathi kweqiniso nenganekwane. Ngakho-ke, kufanele uhole ukumelana (nakuba ingxenye yomzimba wakho ingumshini ...) ukuze uzame ukubeka imingcele kubuchwepheshe obenze umonakalo omkhulu. Igqugquzelwe yimisebenzi edumile efana neBlade Runner, Altered Carbon, kanye ne-The Expanse.
Isithombe samahhala (Umdlalo Webhodi Lezingane) kusukela ku-https://torange.biz/childrens-board-game-48360
Kulabo abangazi uyini umdlalo webhodi lokulingisaLona umdlalo ofana neminye imidlalo, kodwa lapho abadlali kuyodingeka babambe iqhaza noma indima ethile. Ukwenza lokhu, inesakhiwo esiyisisekelo:
Umqondisi wegeyimu: Uma isikhathi somdlalo wokulingisa siqala, ngaso sonke isikhathi sigadwa ngomunye wabadlali ozoba umqondisi noma umpetha womdlalo. Ungumhlahlandlela nomlandi womdlalo, lowo ochaza izigcawu, ingxenye ebalulekile ezoxoxa indaba futhi asebenze njengomlamuleli phakathi kwabadlali ababambe iqhaza. Ngaphezu kwalokho, ungadlala nezinhlamvu ezingavezwanga abanye abadlali, njengezinhlamvu zesibili. Omunye umsebenzi kathishanhloko wukubhekelela imithetho elandelwayo. Ukwenza lokhu, kuzoba iyona enencwadi yemidlalo ngaso sonke isikhathi.
Abadlali: kuzoba yibo bonke abanye abathatha ezinye izindima noma izindima ezihlukile kumqondisi wegeyimu, ngokuvamile odlala amaqhawe endaba. Umdlali ngamunye uzoba neshidi lakhe labalingiswa, elinezici, amakhono kanye nenye idatha efanele yomlingiswa amkhethile. Ungaphinda ufake eminye imininingwane efana nempahla oyigqokile, izikhali, amakhono, umlando wakho, izinto zamandla, njll.
Amamephu: basebenzela ukubeka abalingisi ngesikhathi somdlalo. Kungaba i-cartographic, amabhodi, noma izigcawu ze-3D, izigcawu zangempela, ama-props kanye nomhlobiso, njll.
Ngayo yonke le nto, umdlali uzonquma, nge ukwesekwa kwamathuba amadayisi, yiziphi izenzo ozenzayo ngomlingiswa wakho, futhi umqondisi wegeyimu uzonquma ukuthi lezo zenzo zingenziwa noma cha, ubunzima, nokuthi imithetho iyahlonishwa. Ngaphezu kwalokho, uchwepheshe uzophinde anqume ukuthi yiziphi izenzo ezenziwa ama-NPC noma abalingisi okungebona abadlali.
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi imidlalo yebhodi yokulingisa bayasebenzisana, hhayi ukuncintisana njengeminye imidlalo. Ngakho-ke, abadlali kuzodingeka basebenzisane.
Izinhlobo zemidlalo yokulingisa
Phakathi kwe izinhlobo nezinhlobonhlobo yemidlalo yebhodi yokulingisa yilezi zigaba ezilandelayo:
Ngokusho idlalwa kanjani emdlalweni wokulingisa, ungakwazi ukuhlukanisa phakathi:
Ithebula: okuyizo ezichazwe kulesi sihloko.
Phila: lokho kungenziwa kuzilungiselelo zemvelo, izakhiwo, njll., ngezimpahla zokugqoka noma izimonyo zokulinganisa abalingisi.
Ngeposi- Angadlalwa ngokushintshana kusetshenziswa ama-imeyili, nakuba kungeyona indlela engcono kakhulu noma eshesha kakhulu. Manje i-imeyili nezinhlelo zokusebenza zemiyalezo esheshayo zisheshise le nqubo.
Imidlalo yevidiyo ye-RPG: inguqulo yedijithali yemidlalo yokudlala indima ye-tabletop.
Ngokusho kwe- itimu noma isitayela emdlalweni wokulingisa, ungathola:
Umlando: ngokusekelwe ezehlakalweni zangempela emlandweni wesintu, njengezimpi, ukuhlasela, iNkathi Ephakathi, njll.
Inganekwane: ngokuvamile zixuba izingxenye zomlando, ngokuvamile kusukela eNkathini Ephakathi, nezici zenganekwane, njengokufakwa kwabathakathi, ama-troll, ama-orcs, nezinye izidalwa zenganekwane. Isibonelo, ama-RPG ama-epic-medieval fantasy.
Ukwesaba nokwesaba: enye yezindikimba zabathandi balolu hlobo lokuqukethwe, okungaqondakali, ubuqili nokwesaba. Imisebenzi ye-HP Lovecraft ikhuthaze abaningi babo. Ngaphezu kwalokho, uzozithola ziyizipoki, izilo, ama-zombies, ama-vampires, ama-waswolves, izidalwa ezivela ezindaweni zokucwaninga zesayensi noma ucwaningo lwezempi, njll.
Uchrony: enye into engokoqobo, ebeka ukuthi umcimbi wangempela ungaba njani ngokubona okuhlukile. Ngokwesibonelo, ngabe umhlaba unjani ukube iJalimane yayinqobe iMpi Yezwe II, njll.
Inganekwane yesikhathi esizayo noma inganekwane yesayensi: ngokusekelwe kukusasa lesintu, noma emkhathini. Kukhona okuhlukile okuningi lapha, okufana nemidlalo esuselwe emhlabeni wangemva kwembubhiso, ekwenziweni kwamakholoni kwamaplanethi, i-cyberpunk, njll.
I-Space Opera noma i-epic-space fantasy: uhlobo oluncane oluhlobene nolwedlule, kodwa lapho inganekwane yesayensi iyisithako esisodwa esengeziwe sokulungiselelwa. Isibonelo kungaba indawo eqanjiwe ye-Star Wars, lapho kunenganekwane yesayensi, kodwa kwenzeka esikhathini esidlule esicishe sibe yinganekwane.
Ungawukhetha kanjani umdlalo wokulingisa ofanele
Khetha umdlalo omuhle Ithebula lokulingisa lilula, njengoba kufanele ugxile emaphuzwini abalulekile amaningana, afana nalawa:
Ubudala: kubaluleke kakhulu, njengakweminye imidlalo yebhodi, ukuthi iminyaka eklanyelwe yona ikhonjwe. Akubona bonke abanokuqukethwe okufanele yonke iminyaka, njengoba kungafaka phakathi izithombe zabantu abadala, amagama amabi, futhi ayinkimbinkimbi kakhulu ezinganeni. Kubalulekile ukukhomba ukuthi yiziphi izigaba zeminyaka ezizozidlala, bese ukhetha ezifanele.
Inani labadlali- Okunye okufanele kubhekwe isibalo sabadlali ababasekayo. Uma uzodlala nabangani abaningi noma umndeni, kubalulekile ukuthi abadlali abenele noma amaqembu avunyelwe, ukuze kungabikho osala ngaphandle.
I-Thematic: lokhu kuyindaba yokunambitha, futhi kufanele ukhethe evumelana kangcono nezintandokazi zakho. Kukhona inganekwane yesayensi, uhlobo lwamadragoni nemigodi, enetimu ye-cyberpunk, i-apocalyptic, njll.
Amathuba okusebenzisa: Imidlalo eminingi yokulingisa ihilela ukusebenzisa ibhodi noma ayidingi lutho olukhethekile. Kodwa-ke, ezinye zingadinga indawo eyengeziwe yokusabalalisa, noma izinto ezengeziwe. Kubalulekile ukuthi unake amathuba akho futhi uma ungakwazi ukudlala kahle umdlalo wokulingisa endaweni onayo nangezinsiza onazo, uma ungadlalwa ezindaweni ezivulekile, njll.
Amandla okwenza ngokwezifiso: eminye imidlalo yokudlala indima isekela izinga eliphezulu lokwenza ngendlela oyifisayo, ukwazi ukwengeza abalingisi bakho noma izibalo, ukudala imihlobiso ezosetshenziswa njengebhodi legeyimu, njll. Abenzi nabathandi be-DIY nemisebenzi yezandla, ngokuqinisekile bancamela lolu hlobo lwemidlalo yokulingisa, ezobasiza futhi ukuthuthukisa ubuhlakani babo nomcabango ukuze benze izinguqulo zabo. Isibonelo, ezinye zimane zihlanganisa incwadi eneziyalezo nendaba, futhi isilungiselelo singadalwa nguwe. Ezinye zingabandakanya lokho okubizwa ngamamojula noma izimo ezenza umsebenzi wakho ube lula.
Imidlalo yokudlala indima yobungcweti: ezinye ziyinkimbinkimbi futhi zihloselwe kakhulu ochwepheshe balolu hlobo lohlobo. Yize ama-ateurs nawo engafunda futhi abe ochwepheshe, kodwa angahle angabi abangcono kakhulu ukuqala ngawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Imidlalo yebhodi yokulingisa engcono kakhulu
Imidlalo yebhodi ehamba phambili eyake yabakhona